नेपालमा कसरी हुरू भएकाे थियाे ह्युमन रिसोर्सिङ, कस्ताे छ अहिलेकाे अवस्था ? ग्राेथ सेलरका माेहन अाेझाकाे अनुभव-Setoghar
नेपालमा कसरी हुरू भएकाे थियाे ह्युमन रिसोर्सिङ, कस्ताे छ अहिलेकाे अवस्था ? ग्राेथ सेलरका माेहन अाेझाकाे अनुभव
मोहन ओझा प्रबन्ध निर्देशक ग्रोथ सेलर प्रा.लि.
माेहन अाेझा, प्रबन्ध निर्देशक, ग्राेथ सेलर प्रा.लि
नेपालमा मानव संशाधनको शुरुवात ः
नेपालमा २०४६ मा प्रजातन्त्र आएसँगै २०४८ भन्दा पछाडि नेपालमा निजी क्षेत्र पनि फस्टाउन शुरु भएको हो । निजी क्षेत्रलाई लगानी खुल्ला भएसँगै नेपालमा बैंक, फाइनान्स, जोइन्ट भेन्चर कम्पनीहरु, एनजिओ, आइएनजिओ लगायत फस्टाउँदै गएका भएपनि ती कम्पनीहरुको निम्ति नेपालमा आवश्यक दक्ष जनशक्ति भने उपलब्ध हुन सकेको थिएन । यसैकारण नेपालमा ह्युमन रिसोर्स कम्पनीहरु समेत सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरियो ।
निजी क्षेत्र फस्टाउँदै गएका शुरुवातका दिनहरुमा नेपालका अधिकांश कर्पोरेट कम्पनीहरुले एचआर डिपार्टमेन्ट स्थापना गरेका भएपनि त्यो केवल प्रयोगविहीन जस्तै थियो । तर अहिले भने यस क्षेत्रमा सुधार हुँदै आएको छ । यद्यपि यो क्षेत्र अहिले सम्म आइपुग्दा पनि जुन रुपमा व्यवस्थित हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन ।
कुनै पनि संस्था वा कम्पनीलाई राम्रो सँग सञ्चालनमा आउनको निम्ति जनशक्तिको राम्रो तवरले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिँदै ग्रोथ सेलर प्रा.लि.का प्रबन्ध निर्देशक माेहन ओझा भन्नुहुन्छ, ‘अर्गनाइजेसन भनेको पिपुल म्यानेजमेन्ट हो भन्ने कुरा सबै कम्पनीहरुले बुझ्नु जरुरी छ । त्यसैकारण अहिले नेपालको निजी क्षेत्रमा आवश्यक सबैजसो कामहरु हामीले गर्दै आइरहेका छौं । ट्रेनिङ एण्ड डेभलपमेन्ट, भ्याकेन्सी फुलफिलमेन्ट, स्किल म्यानपावर डेभलपमेन्ट लगायतका हिसाबले हामीले नियमित व्यवसायको अलावा अन्य विशेष भूमीका समेत निर्वाह गर्दै आएका छौं ।’
नेपालमा अहिले यस क्षेत्रमा काम गर्ने थुप्रै कम्पनीहरु छन् । तर ती सबै कम्पनीहरुले प्रदान गर्ने सेवा सन्तोषजनक भने छैन । तर ग्रोथ सेलर भने आफ्नो सेवालाई भिन्न तवरले सञ्चालन गर्दै आएको छ । आफूहरुले स्तरीय सेवामा विशेष जोड दिएको बताउँदै ओझा थप्नुहुन्छ, ’हामीले आगामी मार्चमा एचआर मिट आयोजना गर्दैछौं । विगत देखि नै हामीले हरेक महिना एक्सिलेन्ट सिरिज आयोजना गर्दै आएका छौं । त्यस क्रममा नेपालमा राम्रो तवरले सञ्चालनमा रहेका मध्येबाट कुन उद्योगमा एचआर सम्बन्धी काम कसरी भइसकेको छ भन्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित उद्योग÷व्यवसायका व्यक्तिहरुलाई ल्याई उनीहरुको अनुभव बाँड्ने काम समेत गर्दै आएका छौं ।’
अहिलेकाे अवस्थामा समस्या तथा प्रतिष्पर्धा ः
अहिले यस क्षेत्रमा केही समस्याहरु छन् । कतिपय समस्याहरु ह्युमन रिसोर्स क्षेत्रमा काम गर्ने कम्पनीहरुबाट नै सृजना भएका छन् । केही कम्पनीहरुले गलत तवरले समेत काम गरेको कारण बजारमा प्रवाह हुने सन्देश पनि सोही बमोजिम गलत नै पाइएको छ । यद्यपि निकै स्तरीय सेवा प्रदान गर्ने कम्पनीहरु पनि छन् । उनीहरुलाई पनि सोही बमोजिम गलत नै आरोप लाग्ने किसिमले भने हेर्न मिल्दैन । यसैकारण यस क्षेत्रमा काम गर्ने ह्युमन रिसोर्स कम्पनीहरुको वर्गिकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता समेत छ । यस क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित गर्नको निम्ति ह्यु्मन रिसोर्स कम्पनीहरुले थप भूमीका निर्वाह गर्नुपर्ने जरुरी छ ।
महासंघको अवधारणा ः
यस क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित बनाउने उद्धेश्यले भर्खरै स्टाफिङ एण्ड आउटसोर्सिङको क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरुलाई समेटेर महासंघ पनि सञ्चालन गरिएको छ । ‘फेडरेसन अफ नेप्लिज स्टाफिङ एण्ड आउटसोर्सिङ इन्ष्टिच्युुसन्स नेपाल’ कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय मातहत पौष ९ गते दर्ता भएको हो । हाल यस महासंघमा निजी क्षेत्रबाट स्तरीय सेवामा संलग्न रहँदैआएका १९ ओटा स्तरीय कम्पनीहरु संमेटिएका छन् । आगामी दिनमा यस संस्थामा देशैभरबाट सदस्यहरु थप्दै जाने योजना बनाइएको छ ।
ऐनको आवश्यकता ः
यस महासंघलाई दिशा दिनको निम्ति भर्खर मात्र ऐन बनेर राष्ट्रपतिबाट पास भएको अवस्था छ । पिपुल म्यानेजमेन्ट, राजश्व, रोजगारी लगायतको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले पुर्याएको योगदानलाई ख्याल गरेर उक्त व्यवस्था गरिएको हो । संस्थाको उद्धेश्य र औचित्यता सम्बन्धी गतिविधिहरु समेटिएका डकुमेन्टहरु हाल एफएनसिसिआई, सिएनआई, आइएलओ, ट्रेड युनियनहरु लगायतका निजी प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरुमा समेत पेश गरिएको छ ।
एचआर कम्पनीको स्पष्ट परिभाषित गर्नु आवश्यक ः
नेपालमा एचआर सम्बन्धी काम गर्ने कम्पनीहरु भनेर कस्ता–कस्ता प्रकृतिका कम्पनीहरुलाई भन्ने ? अहिले पनि यसबारेमा स्पष्ट परिभाषा हुन सकेको छैन । नेपालमा सेक्युरिटी कम्पनीहरुले समेत यही वा यस्तै प्रकृतिको सेवा दिइरहेका छन् ।
ह्युमन रिसाेर्समा काम गर्ने कम्पनीहरूकाे तथ्याङ्क संकलन आवश्यक छ ः
अहिले नेपालमा यस क्षेत्रमा काम गर्ने कम्पनीहरु कति छन् भन्ने बारे तथ्याङ्क सङ्कलनको काम समेत हुन सकेको छैन । यद्यपि नेपालमा २ हजार देखि २५ सयको सङ्ख्यामा स्टाफिङ एण्ड आउटसोर्सिङको क्षेत्रमा विभिन्न कम्पनीहरुले काम गरिरहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । साथै यस क्षेत्रमा अहिले पनि कतिपय व्यक्तिहरुले बिना दर्ता काम गरिरहेको भन्ने समेत सुनिन्छ । यसलाई जसरी हुन्छ, तत्काल व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । हामीले पनि काम गर्ने सोच बनाएका छौं ।
डेढ लाखलाई रोजगारी प्रदान गरेको क्षेत्र ः
यस क्षेत्रबाट अहिले करिब डेढ लाख व्यक्तिहरुलाई विभिन्न तवरले प्रत्यक्ष रोजगारी सृजना गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ । कतिपयलाई पार्टटाइम जबको समेत अवसर सृजना गरेका पनि छ । यसरी हेर्दा यस क्षेत्रले पु¥याएको योगदानलाई निकै नै महत्वपूर्ण योगदान मान्नुपर्छ । यद्यपि यस क्षेत्रलाई समयमा नै व्यवस्थित गर्न सकिएन भने आगामी दिनमा निकै ठूलो समस्या आउन सक्छ ।
नीति तय गर्दा निजी क्षेत्रसँग सल्लाह आवश्यक ः
अब स्टाफिङ र आउटसोर्सिङको निम्ति बनेको नीति नेपालमा निजी क्षेत्रबाट काम गरिरहेका कम्पनीहरुसँग कुनै सल्लाह नै नगरी राज्यबाट मात्र एकलौटी रुपमा आएको छ । साथै उक्त नीति कुनै पनि देशको नीतिमा आधारित छैन । नेपालको लागिथ नयाँ अभ्यासको रुपमा उक्त नीति ल्याउन लागिएको भएपनि यो ऐन पूर्ण भने छैन ।
युवाहरुलाई नेपालमा नै रोक्नु जरुरी छ ः
नेपालमा हामीले पिपुल म्यानेजमेन्टको क्षेत्रमा काम गरिरहँदा देखिरहेका छौं कि अहिले नेपाली युवाहरुको ब्रेन डे«न भइरहेको छ । यसकारण नेपाली युवाहरु चाहेर वा नचाहेर विदेशिन बाध्य छन् । यस्तो अवस्थामा नेपाली युवाहरुलाई नेपालमा नै रोक्को निम्ति राज्य पक्षले नीतिगत रुपमा विशेष पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । तर यो काम तत्कालै सम्भव नरहेको कारण तत्कालको निम्ति रोजगारीको निम्ति विदेशिने युवाहरुलाई विदेशिने क्रममा निश्चित सीप सिकाएर क्षमतावान बनाएर मात्र पठाउनुपर्ने आवश्यकता छं ।
नेपालमा नै छैनन् स्कील जनशक्तिकाे याेजनामा ः
अहिले नेपालमा वेरोजगारी दर अत्यधिक बढी छ । विश्वविद्यालयहरुबाट अध्ययन गर्ने व्यक्तिहरु निकै धेरै छन् । शिक्षाले विद्यार्थीहरुलाई शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रदान गर्दै आएको भएपनि नेपालका उद्योगहरुमा आवश्यक जनशक्ति भने अहिलेको शिक्षाले दिन सकेको छैन । यस खाडललाई पुर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसको लागि विभिन्न छोटो अवधिका तालिमहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता समेत देखिएको छ । साथै विश्वविद्यालयले प्रदान गर्ने शिक्षा पनि अध्ययन पश्चात् सिधै बजारमा गएर काम गर्न सक्ने किसिमको हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।
काे हुनुहु्न्छ माेहन अाेझा ?
डोटीमा जन्मिएर धनगढीमा बसाई सरी त्यहीँबाट विद्यालय तह अध्ययन गर्नुभएका मोहन ओझा एसएलसी अध्ययन पश्चात् काठमाडौं प्रवेश गर्नुभएको हो । काठमाडौं प्रवेश पश्चात् भने ऊहाँले निकै सङ्घर्ष गर्नुप¥यो । गोरखापत्र विक्री गर्ने कार्य देखि पियन सम्म, भाँडा सफा गर्ने देखि, अफिस एसिसटेन्ट सम्मका विभिन्न कार्यहरुको अनुभव समेट्दै अहिले ओझा नेपालको नम्बर वन जब प्रोभाइडर एजेन्सीको रुपमा चर्चित ग्रोथ सेलर नामक कम्पनी सञ्चालन गर्दै आउनुभएको छ ।
नेपालमा लामो समय विभिन्न कम्पनीहरुमा रहेर उहाँले जागिर गर्नुभयो । खेतान गु्रपमा प्रवेश सँगै भने जीवनले नयाँ गति लिँदै गयो । उक्त ग्रप अन्तरगतका विभिन्न कम्पनीहरुमा १२ बर्ष काम गरि अनभव समेटे पश्चात् अर्को साढे ४ चौधरी ग्रुपमा रहेर ऊहाँले काम गर्नुभयो ।
नेपालको कर्पोरेट सेक्टरसँग लामो समय नजिक रही जानेका, सिकेका, बुझेका र भोगेका अनुभवको आधारमा ऊहाँलाई नेपालमा ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट आवश्यक रहेछ भन्ने महसुस हुन गयो । त्यही कुरालाई मध्यनजर गरेर नै ऊहाँले ‘ग्रोथ सेलर’ नामक ह्युमन रिसोर्ससँग सम्बन्धित रही काम गर्ने कम्पनी सञ्चालन गर्नुभएको हो ।
सन् २००८ देखि निजी क्षेत्रलाई मध्यनजर गरी आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्ने, सीप विकास तथा तालिमहरु सञ्चालन गर्ने, बजारको अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने लगायतका मानव शंंसाधनसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा ऊहाँले काम गर्दै आउनुभएको छ ।